By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngo-Agasti 2, 2021.
Yintoni ukwahlulwa kwenyonga?
Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqha kwenzeka xa intloko yethambo lethanga inyanzeliswa ngaphandle kwendawo kwisokhethi sethanga.
Zeziphi iimpawu kunye neempawu zokwahluka kwenyonga?
Ayikwazi ukuhambisa umlenze
Isinqe okanye idolo lijijelwe ngaphakathi okanye ngaphandle
Unyawo olunqina, iqatha, okanye umlenze
Ichongwa njani inyonga?
Ugqirha wakho uyakukuvavanya. I-x-ray okanye i-CT scan ingabonisa imifanekiso yokonakaliswa okanye kolunye ukonzakala. Unokunikwa ulwelo olwahlukileyo ngaphambi kokuba kuthathwe imifanekiso ukunceda abanonopheli bababone ngokucacileyo. Tshela ugqirha wakho ukuba wakha waphendula ngokuchaseneyo nedayi.
Luthini unyango lwenyonga esuswe umsipha?
Iintlungu kunokuba yimfuneko.
Ukunciphisa Isetyenziselwa ukuhambisa ithambo lethanga libuyele kwisokethi yelungu lomlenze. Ukuncitshiswa okuvaliweyo yinkqubo yokujikeleza umlenze kunye nokuhambisa isinqe kwizikhundla ezahlukeneyo. Ukuba ukunciphisa okuvaliweyo akusebenzi, ukunciphisa okuvulekileyo kunokuba yimfuneko. Ukunciphisa okuvulekileyo kutyando olwenziwa ngokusikwa.
Ndingawuthintela njani omnye umsipha we-hip?
Landela ezi ngcebiso kwiiveki ezi-6 emva kokulimala okanye njengoko kuyalelwe:
Hlala umqolo wakho uthe tye kwaye iinyawo zithe tyaba phantsi. Musa ukuwela imilenze yakho. Suyama phambili xa uhleli esitulweni.
Gcina amadolo akho ngaphandle. Beka umqamelo okanye umqamelo we-foam embindini wamadolo akho xa uhleli okanye ulele phantsi. Musa ukujija amadolo. Musa ukuphakamisa amadolo akho ngaphezulu kwesinqe.
Akahlali kwisitulo esisezantsi. Sebenzisa iingalo zesitulo kunye namandla omzimba wakho ukuzityhalela phezulu kwindawo ohleli kuyo.
Musa ukugoba esinqeni uchola into emhlabeni. Gobisa amadolo akho xa uchola loo nto okanye usebenzise isixhobo ukuyithatha.
Ndingayilawula njani ihips dislocation?
Kuya kuthatha iinyanga ezi-2 ukuya kwezi-3 ukuba inyonga yakho inyange.
Sebenzisa ukuhambahamba okanye iintonga njengoko kuyalelwe. Buza ugqirha wakho okanye ugqirha wamathambo (ugqirha wamathambo) xa unokubeka ubunzima kwicala lakho elenzakeleyo. Njengokuba inyonga yakho iphola, sebenzisa induku ukukunceda njengoko uhamba de isiqhwala siphele.
Gwema imisebenzi enefuthe eliphezulu kunye nemidlalo. Kuphephe oku kwiiveki ezi-6 ukuya kwezi-12 ezizayo okanye ude umlenze wakho uphinde ubuye namandla.
Yiya kunyango lomzimba njengoko kuyalelwe. Ingcali yonyango iya kukufundisa imithambo ukuze wandise uluhlu lokuhamba esinqeni sakho. Ukuzilolonga kukwenza ukuba iinyonga zakho zomelele kwaye kuphelise iintlungu.
Ndingayifumana nini ingqalelo kwangoko?
Ukhupha inyonga yakho kwakhona.
Kufuneka ndibize nini ugqirha wam?
Unentlungu engapheliyo emva kokuthatha iyeza lentlungu.
Awungekhe uhambe kakuhle ngentonga okanye ngeentonga.
Unemibuzo okanye inkxalabo malunga nemeko yakho okanye ukhathalelo.
IZIVUMELWANO NGENKALO YAKHO:
Unelungelo lokunceda ekucwangciseni inkathalo yakho. Funda konke onako malunga nemeko yakho kunye nendlela yokuyinyanga. Xoxa ngonyango olukhethayo kunye noogqirha bakho ukuze bathathe isigqibo ngenkathalo ofuna ukuyifumana. Soloko unelungelo lokwala unyango olu lwazi lusetyenziselwa ukufundisa kuphela. Ayenzelwanga ukukunika ingcebiso ngonyango malunga nesifo okanye unyango. Jonga ugqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-asmanex
ip 272 ipilisi iphakame
ukuxuba i-xanax kunye ne-ambien
uyifumana njani indlela ye-python
Ukucacisa d vs allegra d